အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် များပြောသော အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်
Welcome, Guest	Golden Hexagon Bussiness Journal
Submit Per Property Submit PDF
ဂျာနယ်အမှတ်စဉ်များရွေးချယ်ရန် Select Issues No.36 Sept 25 ( 2013 )No.35 Sept 18 ( 2013 )No.31 - Aug 21 ( 2013 )No.30 - Aug 14 ( 2013 )No.29 - Aug7( 2013 )No.28 July 31 ( 2013 )No.27 - July 24 ( 2013 )No.26 - July 17 ( 2013 )No.25 - July 10 ( 2013 )No.24 - july3( 2013 )No.23 - June 26 ( 2013 )No.22 - June 19 ( 2013 )No. 21 - June 12 ( 2013 )No. 20 - June5( 2013 )No. 19 - May 29 ( 2013 )No 18 - May 22 ( 2013 )No 17 - May 15 ( 2013 )No. 16 - May 8 ( 2013 )No. 15 - May 1 ( 2013 )No.14 - April 10 ( 2013 )No.13 - April3( 2013 )No.12 - March 27 ( 2013 )No.11 - March 20 ( 2013 )No.10 - March 13 ( 2013 )နိုင်ငံတကာအဆင့်မီနိုင်ငံတကာသတင်းပြည်တွင်းသတင်ျးျ့်ျNo.3 July 30 (2014)်No.3 August6(2014)အာရှထိပ်တန်း ကမ်းခြေစာရင်း၌ ငပလီအမ်းမရိတ်လေကြောင်းလိုင်း ရန်ကုန်မြို့သို့ရန်ကုန်မြို့၌ မြေအောက်လူကူးစင်္ကြန်လမ်းရန်ကုန်လေထု၌ ဖုန်မှုန့်နှင့်ရန်ကုန်လေဆိပ်စီးပွားရေးသတင်းvolume5 issue 48volume5volume6issue 01volume 6volume 5volumevolme 5vol8vol-5VolNovemberNo3. july 30 (2014)No12No.d3 August 20 (2014)No.8 - Feb 28 ( 2013 )No.5 JanNo.5No.46 Dec4 ( 2013 )No.45 Nov 27 ( 2013 )No.42 Nov6( 2013 )No.4- Jan-28-2015No.4 Feb 4No.4 FebNo.4 Dec3(2014)No.4 - JunNo.4 - Jan - 28No.4No.39 Oct 16 ( 2013 )No.38 Oct9( 2013 )No.37 Oct2( 2013 )No.3-October 22(2014)No.3 September3.2014No.3 September 24. 2014No.3 September 17. 2014No.3 September 10 . 2014No.3 October 8No.3 October 22. 2014No.3 October . 8 . 2014No.3 Novmber .12.2014No.3 Novemeber5. 2014No.3 November.12.14No.3 November 5. 2014No.3 November . 12 . 2014No.3 NovemberNo.3 NoNo.3 May 7(2014)No.3 May 28 (2014)No.3 May 21 (2014)No.3 May 14 (2014)No.3 june 25(2014)No.3 June 25 (2014)No.3 June 18(2014)No.3 june 11(2014)No.3 july30 (2014)No.3 July9(2014)No.3 July 30 (2d014)No.3 July 30 (2014)No.3 july 23(2014)No.3 July 23 (2014)No.3 july 2(2014)No.3 July2(2014)No.3 July 16(2014)No.3 July 16 (20d14)No.3 July 16 (2014)No.3 August6(2014)No.3 August 30 (2014)No.3 August 27 (2014)No.3 August 20 (2014)No.3 August 13(2014)No.3 AugustNo.3 12 November . 2014No.3 -March5(2014)No.3 - October 8(2014)No.3 - October 29(2014)No.3 - March 7(2014)No.3 - March 11(2014)No.3 - March 10(2014)No.28. August5(2015)No.28-August 5(2015)No.28-August (2015)No.17 May 21 (2014)No.17 May 18 (2016)No.12March23No.12No.1 Jan 15 (2014)No.1 Jan - 13 (2016)No.1 - Jan -6(2016)No.1 - JanNo.1No. 5. - Jan - 27 (2016)No. 48 - Dec . 23 (2015)No. 48 - DecNo. 48No.4Feb 06No.3May7(2014)No.3june(2014)No.3June 18 (2014)No.3June 11 (2014)No.3June (2014)No.3july 9(2014)No.3July 1d6 (2014)No.3August 13 (2014)No. 3No 37 - May 4( 2016 )No3-May 21(2014)No3- Nov 26 (2014)No3- Nov 26N012May 25 2016May 18March23MarchJune 29 (2016)June 22 (2016)JuneJan -13 (2016)Jan -3(2016)Jan - 20 (2016)JanIsuue 35issue17Issue-27Issue-26Issue-25Issue-24Issue-23Issue-22Issue 8Issue 7Issue 6Issue 5issue 48Issue 47issue 46Issue 45Issue 44Issue 43Issue 42Issue 41Issue 40Issue 4Issue 39Issue 38Issue 37Issue 36Issue 35issue 34issue 33issue 32issue 30issue 3issue 29issue 28issue 21Issue 2issue 18issue 17issue 01ISSSUE 33Isseue 38Isseu 39Isseu 37Isseu 36Isseu 35Issee 41Isse 40Isse 39Feb 4FebDec987 (2016)54.may.20164.may.201164.m37 (2016)3032827 (2016)2723 (2015)232016 May 252016 May 182016 July 62016 July 272016 July 202016 July 132015201420-Jan (2016)16 . March1613/1/201613 - Jan (2016)1312101/13/2016106. 201506(2016)
You are here: Home » စီးပွားရေးသတင်း » အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် များပြောသော အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်
Search Property Properties for : All Buy Rent Location : All Locations ရန်ကုန်(Yangon)မန္တလေး(Mandalay)နေပြည်တော်(Nay Pyi Daw)တောင်ကြီး(Taunggyi)မကွေး(Mergui)ပုသိမ်(Pathein)စစ်ကိုင်း(Sagaing)မော်လမြိုင်(Mawlamyaing)မိတ္ထီလာ(Meiktila)စစ်တွေ(Sittwe)လွိုင်ကော်(Loikaw)ဘားအံ(Hpa-an)ဟာခါး(Hakha)တနင်္သာရီ(Tanintharyi)ကော့သောင်း(Kawthaung)ပဲခူး(Pago)တာချီလိတ်(Tarchilate)တောင်ငူ(Taungngu )မြစ်ကြီးနား(Myitkyina)ကျောက်ပန်းတောင်း(Kyaukpadaung)others Area (Sq. Ft.) : All Area 10-2020-5050-100100-200200-500500-10001000+ Price ( သိန်း ) : All Price Range - 1-5050-100100-200200-500500-10001000-50005000-1000010000-5000050000-100000100000-200000200000+	Keyword : Bedrooms : All Bedrooms 1234567+	Bathroom : All Bathroom
12345+ Search Properties
City / Township
Search Singapore Properties
Posted by ရွှေဆဌဂံ ဂျာနယ် on April 29, 2013 //0Comments
အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်များပြောသော အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်
ဦးသန်းဦး ( မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေ ၀န်ဆောင်မှုအသင်း )
*** မဏ္ဍိုင် အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ***
ဧပြီလကုန်ပိုင်း အထိဈေးကွက်သွက်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ အငှားဈေးကွက်ရှိပေမယ့် အရောင်းအ၀ယ်ဈေးကွက်ကတော့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူး။ မတ်လထဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မငြိမ်မသက်မှုတွေရဲ့ အငွေ့အသက်တွေကြောင့် အိမ်ခြံမြေမှာသာ မကပဲ စီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးကို ရိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဈေးကွက်အေးနေပါတယ်။ အဲဒီ မငြိမ်သက်မှုတွေကြောင့် ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေကို မျက်နှာသာပေးထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေထုတ်ပေးထားတာတောင် သိသိသာသာ ၀င်ရောက်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလိုပဲ မြန်မာ့အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်လည်း သိသာထင်ရှားစွာကောင်းလာခြင်း မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။
ဒေါ်မို့မို့အောင် ( မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေ ၀န်ဆောင်မှုအသင်း )
*** ၀င်းရွှေဝါအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် ***
သင်္ကြန်ပြီးသွားပေမယ့် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်က နည်းနည်းငြိမ်သက်နေပါတယ်။ မေလဆန်းမှာတော့ ဈေးကွက်ပြန်လှုပ်ရှားလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းနေသေးတဲ့အတွက် ဈေးနှုန်းသိပ်မကွာဟ လောက်ပါဘူး။ အခုဈေးကွက်အခြေအနေက အရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကား၊ ဒေါ်လာ၊ ရွှေ၊ အိမ်ခြံမြေ ဆိုပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ခွဲပြီးလုပ်ကြပေမယ့် အခုအခြေအနေကအားလုံးကိုရောထွေးပြီးလုပ်ကိုင်လာကြတာတွေ့ရတယ်။ ရွှေဈေးကျနေတဲ့ အချိန်မှာအိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးကျနေတဲ့အချိန်မှာ သင်္ကြန်ဖြစ်ပြီး ရုံးတွေပိတ်နေလို့ မြန်မာ့အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ ရွှေဈေးနူန်းဆက်ပြီးကျဆင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်က လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဦးအောင်မြင့် ( မန်နေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ )
*** အောင်သမာဓိ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ***
သင်္ကြန်ရက်အပြီး လေးငါးရက်အထိ ဈေးကွက်အေးနေပါတယ်။ လကုန်ပိုင်းကနေ ၀ါမ၀င်ခင်အထိတော့ ရောင်းဝယ်ငှားအလုပ်ဖြစ်မှာပါ။ သင်္ကြန်အပြီးကာလဖြစ်ပေမယ့် အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ငှားဈေးနှုန်းတွေ အတက်အကျမရှိနိုင်ပါဘူး။ လုံးချင်းမြေဈေးနူန်းတွေကတော့ သူ့တန်ကြေးနဲ့သူဈေးရနေပြီ ဖြစ်လို့ ထပ်မတက်နိုင်တော့ဘူးလို့ ယူဆရပါတယ်။ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအငှားဈေးကွက်မှာတော့ ဈေးနှုန်းအနည်းငယ်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။
ကိုသန့်စင်စိုး ( မန်နေဂျာ )
*** ဟိုးဟိုးကျော်အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ***
သင်္ကြန်အပြီးကာလ ဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အခြေအနေသိပ်ပြီးမထူးခြားသေးတဲ့အတွက် ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်လည်း သိပ်ပြီးထူးခြားလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သီလ၀ါဘက်မှာ ဂျပန်ကစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေ ၀င်မယ်ဆိုတော့ အဲဒီဘက်မှာဈေးနှုန်းအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ငှားဈေးကွက်ကတော့ ပုံမှန် တက်ရိုးတက်စဉ်အတိုင်းပဲ တက်နိုင်ပါတယ်။
မအိသက်လျာ ( မန်နေဂျာ )
*** လက်တွဲဖော် အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ***
ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေဝင်လာရင် ဈေးပိုရနိုင်မလားဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ဈေးတင်ပြီး ခေါ်နေမယ်ဆိုရင် အခုလိုသင်္ကြန်ကာလာနှောင်းပိုင်းတွေမှာ အရောင်းအ၀ယ်အေးနေဦးမှာပဲ။ သင်္ကြန်အပြီးကာလမှာကားဈေးကွက်သွက်လာတဲ့အတွက် အငှားဈေးကွက် အနည်းငယ်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဦးချို ( အထွေထွေမန်နေဂျာ )
*** မိုးလွင်( မိဘမေတ္တာ) ***
သင်္ကြန်ပြီးလို့ ရုံးပြန်ဖွင့်ထားတာပဲရှိပါတယ်။ ဧပြီနောက်ဆုံးအပတ်အထိ ဈေးကွက်အေးနေပါဦးမယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်လက်မဆင်းပေမယ့်ဈေးမကျသေးပါဘူး။ သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ရော၊ သင်္ကြန်အပြီးကာလတွေမှာပါ အငှားဈေးကွက်နဲ့ ရုံးစားရိတ်ကြေအောင်လုပ်ဆောင်နေရပါတယ်။ မေလဆန်းပိုင်းကနေစပြီး ၀ါဝင်နေတဲ့အထိရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ငှားဈေးကွက်တစ်ခုလုံး ကောင်းလာမယ်လို့ပဲသုံးသပ်ထားပါတယ်။ အရောင်းအ၀ယ်ဈေးကွက်ကောင်းလာဖို့ကလည်းရောင်းခွန်ဝယ်ခွန်ပြုပြင်ပေးမပေးပေါ်မှာလည်း မူတည်နေပါတယ်။ အခွန်နှုန်းထားလျော်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပေမယ့်လည်းသေသေချာချာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမျိုးတော့ မရှိသေးပါဘူး။
ကိုမင်းနိုင် ( ကြယ်စင်လင်းအိမ်ခြံမြေ )
*** အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း ***
မေလဆန်းပိုင်းမှာစပြီး အလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တင်မကပါဘူး၊ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်း မေလထဲမှာပဲစပြီး ကောင်းလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မေလကနေ ၀ါမ၀င်ခင်အထိတော့ အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းတွေမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်လာမှာပါ။
*** Excellent အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း ***
အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်ကောင်းမကောင်းဆိုတာ သင်္ကြန်အပြီးကာလနဲ့တော့ သိပ်မဆိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကို အကဲခတ်ပြီး အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ကြတာဖြစ်လို့ ပုံမှန်ထက်တော့ဈေးကွက်မပိုနိုင်သေးပါဘူး။ မြို့နယ်စွန်ဈေးကွက်ပိုင်းမှာတော့ မြောက်ဒဂုံကဈေးကွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်။ သင်္ကြန်အပြီးဈေးကွက်ရဲ့ဈေးနှုန်း အကျဘက်တော့ မရှိနိုင်ပါဘူး။ လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ တက်ရိပ်ပြနေပါတယ်။
*** Lucky Joint အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း ***
အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အခြေအနေကတော့ ဧပြီလကုန်ပိုင်းနဲ့ မေလဆန်းပိုင်းလောက်မှာ စတင်ပြီး လုပ်ငန်းတွေကောင်းလာမှာပါ။ အဲဒီအချိန်ကျမှ ပြောင်းရွှေ့မယ့်သူတွေကြောင့်ဈေးကွက်လှုပ်ရှားလာမှာပါ။
အရောင်းအ၀ယ်ပိုင်းကတော့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။ ဈေးနှုန်းဘက်ပိုင်းမှာတော့ အရောင်းဈေးတွေတင်ခေါ်နေပေမယ့် တကယ်တမ်းအရောင်းအ၀ယ်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတော့ ညှိနှိုင်းပြီး ရောင်းဝယ်နေရပါတယ်။ ရောင်းဈေးကို ညှိနှိုင်းပြီး သတ်မှတ်နေရတဲ့သဘောမှာရှိပါတယ်။ အခုအချိန်က အငှားဈေးကွက်ကောင်းတဲ့ အချိန်အခါဖြစ်လို့ ဈေးနည်းနည်းပိုခေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
Category : စီးပွားရေးသတင်း &သတင်း &အိမ်ခြံမြေသတင်း &အမေးအဖြေ &ပြည်တွင်းသတင်း
စီးပွားရေး သတင်း အစုံအလင်
News Category	ကားသတင်း (61)
Recent News	၁၀ လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကျပ် ၁၄၄၂ ဘီလီယံကျော်ခွင့်ပြုထား
ဟံသာဝတီလေဆိပ်စီမံကိန်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ကြန့်ကြာနိုင်
ဗီဒီယိုဖိုင်များကို ရုပ်မြင်သံကြားစက်ဖြင့် လွှဲပြောင်းကြည့်ရှုနိုင်မည့် Apps Facebook မကြာမီ မိတ်ဆက်မည်
Yahoo ကုမ္ပဏီကို ၀ယ်ယူမည့် Verizon ၏အစီအစဉ်အကောင်အထည်ပေါ်လာရန် နီးစပ်နေ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ပြုပြင်ရန် ဂျပန်မှ ချေးငွေရယူရန် လွှတ်တော်အတည်ပြု
PDF posts : 5
News : 1800
Property : 62
Total : 1,897
အိမ် ခြံ မြေ
Need Help Contact to sanlinnpaing@ghgroups.com or read frequently ask question here
© 2013 ရွှေဆဋ္ဌဂံ ဂျာနယ် All right reserved. GH groups Send to Friend